ဖုန်းတွေနဲ့ပတ်သတ်ပြီး - MYSTERY ZILLION
October 2010 edited October 2010 in My Article
[FONT="]ယနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးကချပေးနေတဲ့ဖုန်းအမျိုးအစားလေးတွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး သိသလောက်ကတော့ chocolate သိသလောက်ပေါ့နော်[/FONT]
[FONT="]မှားကောင်းမှားနိုင်ပါတယ်နော် သိတဲ့ MZ မောင်နှမများလည်း၀ုိင်းပြီးဖြေပေး ဖြည့်ပေးပါနော်[/FONT]
[FONT="]ဒါတွေကိုပြန်ပြီး category ပြန်ခွဲကြည့်မယ်ဆိုရင် line ph , CDMA နဲ့ GSM ပေါ့နော်[/FONT]
[FONT="]Line phone မှာဆိုရင် သိပြီးတဲ့ ဒီအိမ်ဖုန်း လိုင်းကြိုးဖုန်းအပြင် အခု ၁၀ သိန်းတန်ဆိုပြီး ဂဏန်း ၈ လုံးနဲ့ထပ်ချပေးနေတဲ့ဖုန်းက ဘယ်လိုများပါလိမ့်နော်???[/FONT]
[FONT="]CDMA မှာဆိုရင်လည်း 450 MHz (WCDMA ကမ်းရိုးတန်းဖုန်းလို့ခေါ်မယ်ထင်တယ်နော် ) နဲ့ အခုပေးနေတဲ့ 800 MHz (ငါးသိန်းတန်ဖုန်း) ပေါ့[/FONT]
[FONT="]အဲဒါအပြင် ကဒ်ဖုန်း တွေကရော 450 MHz ပဲရတာလား ???[/FONT]
[FONT="]GSM မှာဆိုရင်လည်း တရား၀င် ၁၅ သိန်းတန်ဖုန်းနဲ့ ဟိုတလောကခေတ်စားလိုက်သေးတဲ့ ကဒ်ဖုန်းတွေပေါ့ (FEC 20 တန်တို့ 50 တန်တို့ပေါ့)[/FONT]
[FONT="]ဒါဆို ဒီဖုန်းတွေကို တချို့ကလည်း ရန်ကုန် နဲ့ မန်းလေး ပဲရတယ် တချို့ကလည်း နေပြည်တော်မှာရတယ် စသည်ဖြင့်ပေါ့နော် [/FONT]
[FONT="]ဖုန်းတွေက ချပေးတာတော့များပြီး (chocolate ပဲသေချာကောင်းကောင်းမကွဲပြားလို့လားမသိ ) [/FONT]
[FONT="]ဘယ်ဖုန်းက ဘယ်မှာပဲသုံးလို့ရပြီး ဘယ်လိုကောင်းတယ်မကောင်း၀ူးလေးကို တချက်လောက်သိတဲ့ MZ မောင်နှမတွေပြောပြပေးကြပါနော်[/FONT]
ကျန်သေးတယ် ဟ ခု ဖိုက်ဘာ အင်တာနက် ဖုန်းဆိုလားမသိဘူး
ဖုန်း ပျောက်တာ စိတ်နာလို့ GSM မကိုင်ပဲ ပြောင်းတော့မလို့လား?????????
အဲဒါက ဖုန်းလိုင်းကို ဖိုင်ဘာနဲ ့ပြေးထားတာပါ အိုင်ပီဖုန်းလို ့လဲခေါ်တယ် FTTX ကဖိုင်ဘာတူဒယ်ဟုမ်းတဲ ့VOIP ဆားဗစ်ရတဲ ့ဖုန်းတစ်မျိူ းပါ အိုင်ပီစတားစနစ်လိုပေါ ့အိုင်ပိစတားက စက်တလိုက်ကနေ ဖုန်းဒေတာနဲ ့အင်တာနက်ဒေတာသွားတယ် FTTX ကတော ့ဖိုင်ဘာကနေပြီသွားတယ်
Tin Zaw Tun
CDMA 450 က WCDMA မဟုတ်ပါဘူး။ GSM ကို အဆင့်မြှင့်ထားတဲ့ 3G Network မှာသုံးသော ဖုန်းဖြစ်ပါတယ်။
[FONT="]နေပြည်တော်မှာချပေးတဲ့ ဖုန်းက တစ်နိုင်ငံလု့း ပြောလို့၇တယ်တဲ့ဗျာ
ကျနော်တော့ မကိုင်နိုင်ပါ :P :P
ကျပ်ငါးသိန်းတန်ဖုန်းတွေကို မြို့သတ်မှတ်ချက်ကျော်ရင် ဖုန်းခ တစ်မိနစ် ၆၀ ကျပ်နဲ့ခေါ်လို့ရတယ်လို့တော့ sep 30 ထုတ် internet journal မှာတွေ့လိုက်ရပါတယ်
အင်တာနက်ဆိုင်တို့...ဂိမ်းဆိုင်တို့...ဟိုလေအလုံခန်းတွေထဲမှာလိုင်းမမိရင်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရနိုင်မလဲ...ကျွန်တော့် game ဆိုင်လာတဲ့ကလေးတွေ ဆိုင်ထဲမှာလိုင်းမမိကြလို့ ....သူတို့ကိုကြည့်ပြီးအားနာလို့ပါ.... သုံးလို့ရနိုင်မဲ့စက်တစ်ခုခုလောက်ညွှန်ပေးကြပါ...
tmmokpm wrote: »
repeater တပ်လိုက်ပါလား C or G ကြိုက်တာ၀ယ်လို့ရပါတယ်။
ရန်ကုန်နဲ့ မန္တလေး က 800 mhz ပါ။ 01-730 နဲ့ စပါတယ်(ရန်ကုန်)။ နယ်မှာသုံးတာက 450 mhz ပါ။ CDMA ကိုပြောတာပါ။ အဲဒါမှာလည်း 15 သိန်း နဲ့5သိန်း နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ 5သိန်းတန်က 09-49 နဲ့ စ ပါတယ်။ 15 သိန်းက 09-85 နဲ့ စ ပါတယ်။ မှားလျှင် ခွင့်လွှတ်ပါ ခင်ဗျား........
တို့နိုင်ငံများ ... လျှပ်စစ်မီးသာ 24 နာရီပြည့်အောင်မပေးနိုင်တာ ... နည်းပညာအသစ်တွေကတော့ လုပ်သလားမမေးနဲ့ .. :P
America မှာတောင် FTTH ကိုတစ်နိုင်ငံလုံးမသုံးနိုင်သေးတာ မြန်မာနိုင်ငံက အမှီလိုက်နေတယ်ဆိုတော့ .. နောင်ဆယ်နှစ်ကြာရင် ဘာဖြစ်လာအုံးမလဲမသိ ..
450MHz က CDMA ကမ်းရိုးတန်းလို့ လူသိများကြပါတယ်။
WCDMA က GSM ပါ။ မတူပါဘူး။
ကျွန်တော်ကြားဖူးနား၀ ရှိတာကတော့ အဓိကအားဖြင့် CDMA (Code Divide Multiple Access) , TDMA (Time Divide Multiple Access) ရယ် FDMA (Frequency Divide Multiple Access ) ဆိုပြီးသုံးမျိုးရှိပါတယ်။ CDMA ကိုလည်း frequency အလိုက်ပြန်ခွဲပါတယ်။ 450 , 800 စသဖြင့်ပေါ့ဗျာ။ WCDMA ကတော့ CDMA genre ထဲက 3G အမျိုးအစားလို ့ယူဆရပါတယ်။ TDMA ကတော့ အားလုံးသိကြတဲ့ ဆယ်လူလာကိုပြောတာပါ။ FDMA ကတော့ GSM (Global Satellite Mobile) မျိုးနွယ်၀င်ပါပဲ။ GSM မှာလည်း frequency တွေအများကြီးရှီပါတယ်။ 800 MHz ,850 MHz, 900 MHz , 1800 MHz , 1900 MHz စသဖြင့်ပေါ့ဗျာ။ ဘန်းကျော်မှာတော့ ဘယ် frequency band တွေသုံးလည်းတော့မသိဘူးခင်ဗျ။